01.08.2018 04:32 GBP/JPY ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ - 1 August 2018
GBP/JPY ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ - 1 August 2018 GBP/JPY …
06.12.2018 06:57 EUR/JPY: ဝက်ဝံ (အကျ)သည် EURကိုဆွဲချပါသည်
EUR/JPY နေ့စဉ်ဇယားတွင်၊ "ကျယ်ပြန့်လာသော wedge" နှင့် "ငါးမန်း" ပုံစံများ (၈၈.၆% ပစ်မှတ်)တို့၏ အကောင်ထည်ပေါ်မှုဖြစ်လာသည်။
08.01.2019 06:48 CAD/JPY အပေါ်လောင်းကြေးထပ်ပါ
11.01.2019 07:38 သတင်းအပေါ် GBP/JPY ရောင်းဝယ်ခြင်း
ဗြိတိန်မှ စီးပွားရေးအချက်အလက်အချို့အား ယနေ့ထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မည်။
19.03.2018 08:10 အပတျစဉျ Forex ခနျ့မှနျးခကျြ: မတျလ 19-23
ဒီတစ်ပတ်တော့ကုန်သည်တွေအတွက် ကြာကြာ-စောင့်ဆိုင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ် - အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်အစည်းအဝေးသတင်းကိုသယ်ဆောင်လာပေးပါပြီ။ ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့် FBSစိစစ်ရေးအဖွဲ့မှအကြံပြုချက်များအတွက်ရောင်းဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုရှာဖွေပါ။
12.03.2018 13:04 အပတျစဉျ Forex ခနျ့မှနျးခကျြ: မတျလ 12-16
FBSဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူများမှ Forexမားကတ်အကြောင်း ဗီဒီယိုတစ်ခုကို စီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားပါသည်. ထရိတ်ဒင်း အကြံပြုချက်များ နှင့် ဗဟုသုတများကိုရယူနိုင်ရန် ကြည့်ရှုလေ့လာလိုက်ပါ!
16.04.2018 12:10 အပတ်စဉ် သုံးသပ်ချက်: ဧပြီ ၁၇-၂၀